ကပ်ရောဂါတခုဖြစ်ရင် ဝိညာဉ်တွေ ပိုများလာတတ်တယ်တဲ့ (သရဲများနဲ့အတူ Q ဝင်ခြင်း) - Zet Star
ကပ်ရောဂါတခုဖြစ်ရင် ဝိညာဉ်တွေ ပိုများလာတတ်တယ်တဲ့ (သရဲများနဲ့အတူ Q ဝင်ခြင်း)
ဒီသတင်းတွေက New York Times သတင်းစာမှာပါလာတာ။ ဝိညာဉ်တွေနဲ့အတူ ကွာရန်တင်းဝင်နေရတဲ့ အဖြစ်တွေတဲ့။ ကြောက်စရာပါပဲ..။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်။ အသံက အိမ်ရှေ့တံခါးကနေ စတယ်။ မစ္စတာဂိုမက်ဇ် (Adrian Gomez) ဆိုတဲ့သူရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တာ…။ Adrian Gomez က သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မှာ နေတာ။
ပထမရက်အနည်းငယ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သူတို့ အလုပ်မသွားဘဲ အဝေးကအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြ..။ စားကောင်းသောက်ဖွယ်ရာတွေချက်၊ မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ မနက်တိုင်း ၂ မိုင်လောက်လမ်းလျှောက်၊ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာပျော်နေသေးတယ်။ မကြာပါဘူး ..ဧပြီလ အလယ်လောက်ပေါ့။ ညတစ်ညမှာ အိမ်တံခါးခေါက်သံ အကျယ်ကြီး သူတို့ကြားလိုက်ရ။ တံခါးခေါက်သံက ကျယ်လွန်းလို့ သူတို့တိုက်ခန်းရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ခန်းကကြားရတဲ့အထိပဲ..။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တံခါးမှာမရှိခဲ့ပါ..။ ရက်နည်းနည်းထပ်ကြာတော့ ညဘက် မစ္စတာဂိုမက်ဇ် အိပ်ရာထဲမှာ လှဲနေတုန်း..အိပ်မပျော်သေးခင်ပေါ့..။ အနီးအနားကပြတင်းပေါက်မှာ အရိပ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ အရိပ်က ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကို အလွန်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ခါလိုက်တယ်။ “ ငလျင်လှုပ်တာများလား..”
ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးက ပိတ်ထားတယ်။ ပြတင်းပေါက်အရိပ်က ငြိမ်နေဆဲ.. “ လူ? ..ဟိုတစ်နေ့က လူများလား…ငှက်များလား ..အခြားသတ္တဝါတစ်ကောင်ကောင်..?
မစ္စတာဂိုမက်ဇ်ဟာ အလွန်ပဲ ငြိမ်နေတဲ့ အရိပ်ကိုကြည့်ပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကြောက်စရာ ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုကြည့်ရသလို ရုတ်တရက် ​ချောက်ချားလာတယ်။ မစ္စတာဂိုမက်ဇ်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟာ.. အိမ်ထဲက အဲဒီလို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ကြားရတဲ့အသံတွေ ဘယ်ကလာသလဲ စဉ်းစားမရပါ။ သူတို့အိမ် အထက်ကအလွှာမှာလည်း ဘယ်သူမှမနေဘူး။
ဂိုမက်ဇ်က အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ..။ I.T. မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူ..။ သိပ္ပံဆန်ဆန် လက်တွေ့ကျမျှတတဲ့ အတွေးရှိသူ..။ တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်၊ လူလည်းဖြစ်နိုင်တာမို့ ပြတင်းပေါက်က အရိပ်အတွက် အစွန်းရောက်အောင်တော့ တွေးမကြောက်ခဲ့။ ပြဿနာက ဒီအသံတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ကြောင်းကျိုး​ဆီလျော်တဲ့ အဖြေမရ..။ ဒါကြောင့် သဘာဝလွန် အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စပြီး စဉ်းစားမိတာပဲ..။
ကပ်ဆိုက်နေတယ်။ ကမ္ဘာကလူတွေ ကိုရိုနာရဲ့ နေ့ရက်တွေကို အိမ်ထဲကပဲ Zoom နဲ့ အစည်းအဝေးတွေလုပ်။ အိမ်ကနေ online နဲ့ ကျောင်းတက်ရ။ ဒီကြားထဲ အသံတွေ၊ အမည်းရောင် အရိပ်ပုံတွေ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေ ဟိုရွေ့ ဒီရွေ့.. သရဲခြောက်ခံရလို့ သတင်းပေးတဲ့ အိမ်တွေ များလာတယ်။
တစ္ဆေများတည်ရှိမှုအတွက် သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိပါ။ မမြင်ရတဲ့အရာမို့ ယုံချင်မှလည်း ယုံကြမယ်။
Chapel Hill က မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ Kurt Grey က တိရစ္ဆာန်တွေ၊ စက်တွေမှာ ကပ်နေတဲ့ သေလွန်သူတွေကို စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ လေ့လာတဲ့သူပေါ့။ သူက ကိုရိုနာကြောင့် အထီးကျန်ဆန် သေဆုံးမှုတွေ၊ မသေခင် အထီးကျန် စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေက COVID-19 ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ “ကွာရန်တင်း quarantine မှာနေရသူတွေအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်တည်းမှုတွေ သိပ်များတာကိုး။ “
ကပ်ဘေးကြီးကျရောက်တဲ့အခါ အထီးကျန် စိတ်စွဲပြီး သေဆုံးတဲ့သူတွေများတယ်။ သရဲတစ္ဆတွေရောများလာတယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်ကြီးက ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်နောက်က တွဲကပ်ပါလာတဲ့ သရဲ ဘီလူးတွေ နှောက်ယှက်ဖမ်းစားတဲ့ကပ်မျိုး..။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် Pew Research Center က တွေ့ရှိချက်ကတော့ အမေရိကန် လူမျိုး ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းက သရဲကို သူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ဖူးတယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတယ်။
၂၀၁၉ YouGov စစ်တမ်းတစ်ခုအရ.. အမေရိကန်လူကြီး ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းက သရဲတွေကိုယုံကြည်ကြတယ်။
နယူးယောက်က အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် ပက်ထရစ်ဟင်ဒ် (Patrick Hinds)ပေါ့။ သူက မက်ဆာချူးဆက်အနောက်ပိုင်းက အဲရစ်ဘတ်စ်ဘက်မှာ အိမ်ငှါးနေတယ်။ တစ်ည .. ဟန်းစ်က မနက် ၃ နာရီလောက်မှာ ရေငတ်လို့ရေထသောက်တာ။ သူမ မီးဖိုချောင်ထဲ၀င်လာတော့ ရုတ်တရက် အသက် ၅၀ ကျော် လူဖြူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကယူနီဖောင်းနဲ့ စားပွဲမှာထိုင်နေတာ။ ဘယ်ကဝင်လာပါလိမ့်လို့ အခြားနေရာတွေလှမ်းကြည့်ပြီး စစ်သားကိုထပ်ကြည့်လိုက်တော့ မရှိတော့ပြီ။ ဟန်းစ်က ဒါဟာ သရဲပါလားလို့ ပုံမှန်တစ်ခုလို သဘောပေါက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ခင်ပွန်းကိုတောင်ပြောမပြဖြစ်။ “ ကျွန်မက ဒါတွေ သိပ်မထူးဆန်းတော့ ဘူး”
ကိုရိုနာကြောင့် အိမ်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ Mrs. Cowan (အသက် ၂၆ နှစ်) ကတော့ ညဘက်ဆို သရဲတွေလှေကားတက်ဆင်းပြေးနေကြလို့ အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရ..။ “ သူတို့အသံက တစ်မျိုး၊ အခြားအသံတွေနဲ့ မတူဘူး”
အီတလီ Florence မှာ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် Madison Hill တစ်ယောက် သရဲခြောက်ခံရ..။ “ရေချိုးခန်းကို ကျွန်မ အမြဲသံသယရှိတယ်။ စိတ်မသန့်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်မကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်၊ ​​တံခါးတွေကြားက တိတ်တဆိတ်ကြည့်နေတာ…”
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် Mr. Dunlap က သူတို့ သရဲကိုပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့တာ နွေရာသီကြီးတဲ့။ ညဉ့်သန်းခေါင်မှာရေချိုးခန်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာ။ မိန်းမတစ်ယောက် အစိမ်းရောင်အင်္ကျီနဲ့ ရပ်နေတာ။ “ မီးဖွင့်လိုက်တော့ ပျောက်သွားတယ်” Mr. Dunlap တို့စုံတွဲတွေ့ရတဲ့သရဲက အာရှတိုက်က အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးတဲ့။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ။ ၃၉ နှစ်အရွယ် ရှေ့နေ Danielle ကြောင်းကဒီလို..။ သူ COVID-19 ကြောင့် အိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ အချိန်..။ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ၊ ရစ်ချ်မွန် (Richmond, British Columbia )မှာရှိတဲ့ သူမအိမ်မှာပေါ့..။ သူ မသုံးဖြစ်တဲ့၊ ဧည်သည်တွေလာရင်အိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းထဲက မီးပွင့်နေတယ်။ Danielle မီးပိတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ မီးက ထပ်ပွင့်လာတယ်။ မသေချာလို့ အထဲကိုဝင်ပြီး မီးထပ်ပိတ်တယ်။ Danielle အိပ်ခန်းကပြန်ထွက်တာနဲ့ မီးက ထပ်ပွင့်တာပဲ..။ ဒေါသဖြစ်တာတဲ့ Danielle က “ ဒီမီးကို နောက်ထပ်ဖွင့်ရဲရင်ဖွင့်ကြည့်လို့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောခဲ့ရ..။
နောက်တစ်နေ့ မင်္သကာလို့ သူ အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်တော့ မျက်နှာကြက်မှာ အလင်းရောင်တွေတွေ့ရ….။ “ အလင်းရောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး စကားတွေပြောနေတဲ့ အသံတွေကြားရတယ်။ “
နောက်တစ်နေ့ Danielle က မျက်နှာဖုံးတွေချုပ်နေတုန်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကြီး ပိတ်စကုန်သွားလို့သွားယူတာ ပြန်လာတော့ ပထမပိတ်စ မရှိတော့ဘူးတဲ့။
မကြာသေးမီကပဲ Danielle အိပ်ခန်းထဲမှာ မျက်နှာဖုံးတွေချုပ်နေတုန်းပေါ့။ မျက်နှာဖုံးတစ်ခု ထပ်လုပ်ဖို့ ဖျင်အပိုင်းအစတစ်ခုပဲရှိလို့ အပိုင်းအစသွားယူ လိုက်တုန်း ပထမအဝတ်စ ချက်ချင်းပျောက်သွားတာ။ “ ၂၀ စက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာ ပျောက်သွားတာ.. အမှိုက်ပုံးထဲများ ထည့်မိသလားရှာသေးတယ်။ မယုံချင်လို့ တစ်အိမ်လုံးဗြောင်းဆန်နေအောင်ရှာတာ။ ဘယ်နေရာမှာမှ ပြန်မတွေ့တော့ဘူး။ ”
သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ John E.L. Tenney (paranormal researcher) က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သူ Ghost Stalkers တီဗွီအစီအစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက သရဲခြောက်တယ်ဆိုပြီး သတင်းရတဲ့အိမ်တွေ တစ်လမှာအနည်းဆုံး ၅ အိမ်ကနေ ၁၀ အိမ်ရှိတယ်တဲ့။
သရဲတွေရယ်၊ သွေးလည်ပတ်နေတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လူသားတွေရယ်.. အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ တူတူ..။ တစ်ခါတလေ အချင်းချင်းမ​ကျေနပ်ကြ ..တင်းမာမှုတွေဖြစ်..။
ဝိဉာဉ်တွေဆိုတာ သိပ်ထူးဆန်းတယ်။ ရောဂန္တရကပ်ဖြစ်ရင် ဘီလူးတွေက ထ ကြွလာတတ်ကြသတဲ့။ ရုတ်တရက် ရောဂါကပ်ကြီးကြောင့်ပဲ လူ ၆ သိန်းကျော် သေဆုံးသွားတော့ ဝိညဉ်လောကကို လှန့်နှိုးလိုက်သလိုများဖြစ်သွားတာလား။
သင်ရော ညသန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဆူညံသံတွေကြားဖူးပါသလား ..။
← ရွှေမြန်မာတို့ လေးစားအတုယူဖွယ်ရာ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အမှိုက်ပစ်ခြင်း အလေ့အထ
တူရကီရဲ့ မြေထဲပင်လယ်ထဲက ရန်သူအသစ် (တူရကီကတော့ အိပ်နေတဲ့မြွေဟောက်ကို ခေါင်းသွားပုတ်ပြန်ပြီ) →